Diddaan Barsiisotaa Finfinee, manneen barnootaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffatti Baldhinaan Itti Fufe . | Biiftuubilisummaa
← University Ambo Keessatti WARRAAQSI Barattootaa Itti Fufe!
Waldiddaan barattoota Oromoo fi Basaasota TPLF jidduu Jabaachaa Dhufe. →
Diddaan Barsiisotaa Finfinee, manneen barnootaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffatti Baldhinaan Itti Fufe .
Posted on March 27, 2012	by biiftuubilisummaa
Bitootessa 27,2012 Finfinnee.
Diddaa barsiisotiin eda’uu midhaan dabalatee gaaffii mirgaa kaasan daran babal’achuu irraan Bitootessa 26, 2012 Manneen Baruumsaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran hojii barsiisuu fi barachuu dhaabanii jiru
Sababa “Daballii ykn eda’uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu.
Barsiisotiin manneen barnootaa armaa gaditti jiran sochii eegalan kana irratti barattooti Oromoo akka faana ka’anii gaaffii mirgaa kan saba ba’aa akka gaafatan waamicha gochaa akka jiran gabaasi nu gahe addeessa. Hanga ammaatti manneen barnotaa gaaffii kaasanii cufaman keessaa:-
Aqaaqii, Mana Baruumsaa DARAARTUU TULLUU
Aqaaqii, Mana Baruumsaa BIRUh TASFAA
ASKOO, Mana Baruumsaa QAALA HIYOT
Gullallee, Mana Baruumsaa MADINALAM
Inxooxxoo Sad. 2ffaa
Kolfee, Mana Baruumsaa sad. 1ffaa QAALEE
Ekkaa, Mana Baruumsaa KOKOBATSIBA
Mana Baruumsaa Sad. 2ffaa BLACK LION
Mana Baruumsaa BIRHAN GUZOO SAD.1ffaa yoo ta’an, Manneen baruumsaa armaan gadii immoo fincila eegalaa jiru
Mana Baruumsaa Minilik
Mana Baruumsaa Black Lion Sad. 2ffaa
Mana Baruumsaa Laaftoo Sad. 2ffaa
Mana Baruumsaa Faanaa Sad. 2ffaa
Mana Baruumsaa Sadil Sad. 2ffaa
Karaa biraa immoo Yunivaristii Jimmaa, Adaamaa fi Wallaggaatti sochiin fakkaataa eegalee mootummaan Wayyaanee yaaddoo irraan kan ka’e dabballoota isaa gara Universitichaatti bobbaasee jiraachuu qeerroon gabaasa.Kana malees Barattootni Yun. Finfinnee Kaampaasii Bishooftuu (veterinary) baratan 400 (dhibba afur) ta’an sababa “kaffaltiin practice bahuuf nuuf kaffalamu, baruumsa keenyarratti dhiibbaa guddaa fidaa waan jiruuf kaffaltiin gahaa ta’e dabalataan nuuf kennamuu qaba.” Jechuun petition gochudhaan diinii kaampasichaatti iyyata galfataniiru.